२५ अर्ब विभिन्न शीर्षकमा बाँडिएको देखिन्छ, त्यो गलत हो । - Wnepal.com::
२५ अर्ब विभिन्न शीर्षकमा बाँडिएको देखिन्छ, त्यो गलत हो ।
मंगलबार, जेष्ठ २२, २०७५
हलै सदनमा अर्थमन्त्ती युवराज खतिवडाले १३ खर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ । कतै भने खुसीयाली छाएको छ भने बतैअत्याधिक विरोध भएको छ ।
यो बजेटले के के राम्रा काम गर्यो र के के गर्न नहुने काम ग¥यो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग गरेको कुराकानीका महत्वपूर्ण अंश ः
हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको जम्बो बजेटलाई तपाईंले बसरी लिनुभएको छ ?
तपाईंले भनेजस्तै बजेट जम्बो छ । यसको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने कामम गरेको छ ।
कहाँ कहाँ कमजोरी छन् त जम्बो बजेटमा ?
मुलुकले नै धान्न नसक्ने बजेट आयो । पैसा नबाँड्ने कुरा गर्ने सरकारले घुमाउरो बाटोबाट २५ अर्ब जति विभिन्न शीर्षकमा बाँडेको छ । र धेरै मशत्वकांक्षी र हावादारी कुरा बजेटमा राखिएको छ । यो गलत हो ।
आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएर आयो । यो पूरा होला त डा. साप ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै कुराले प्रभाव पारेको छ । कृषिको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यसले नै आर्थिक वृद्धिदर निर्धारण गर्ने हो । तयारी अवस्थामा नरहेका आयोजनामा बजेट हालिएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गलाई ३ अर्ब छुट्याइएको छ । तर यो वर्ष यो आयोजन पूरा हुँदैन । नेपालको कृषि उत्पादकत्व वर्षमा दोब्बर गर्ने भनिएको छ तर, त्यो सम्भव छैन । हावादारी कुरा गरेर जनता झुक्याउने काम सरकारले सुरु गरेको छ ।
यो बजेटले के चाहिँ गर्न सकेन त डाक्टर साप ?
बजेट ठिकै छ । बजेटमा कार्यान्वयन सम्भव नहुने आयोजनाहरू राखिएको छ । राजनीतिक लाभका लागि कार्यक्रमहरू समावेश भएका छन् । जसका कारण वास्तविकभन्दा पनि कार्यान्वयन नहुने जोखिम हुन्छ । अहिलेको बजेटले स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्याे ।
तर त्यसो हुन सकेको देखिएन । भोलि प्रदेशले पनि बजेट ल्याउँछ, स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउँछ । त्यो सबैलाई हेर्नुपर्छ । ती सबै बजेट मुलुकमा धान्न सक्ने खालको आउँछन् कि आउँदैनन् त्यतातिर ध्यान दिएको देखिएन ।
बजेट कम्युनिष्टहरूको राजनितिक नाराबाट प्रभावित भएको हो त ?
त्यो एउटा सपिङ लिस्ट थियो । कतिपय अवस्थामा बजेट त्यसबाट प्रभावित भएको छ । वितरण नगर्ने भन्दाभन्दै पनि २५ अर्ब रुपैयाँ जति विभिन्न शीर्षकमा बाँडिएको छ । त्यसकारण राजनीतिक नाराबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।
करको दायरा बढाउने काम भयो । यसको दीर्घकालीन असर कस्तो पर्ला डाक्टर साप ?
सही प्रश्न सोध्नु भयो । आफ्नो घोषण पत्रका कुरालाई बजेटमा ल्याएर जनता झुक्याउने काम भएको सत्य हो ।
अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको पनि लगानी बढाउनु पर्छ । अहिले आयकरमा नयाँ दरको प्रस्ताव गरिएको छ ।
२० लाखभन्दा धेरै करयोग्य आय भएकालाई थप कर लगाउने भनिएको छ । यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने काम बढ्दैन र भएका लगानीकर्ताहरू पनि पलायन हुने डर हुन्छ यो बुझ्नु जरुरी छ ।
बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा तपाई विश्वास हुनुहुन्छ त ?
बजेट कति कार्यन्वयन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । जस्ताको तस्तै खर्च गर्ने कुरा गैण छन् । तर केही खर्च होला अरू भन्न सकिँदैन नि !राजतिलक साप्ताहिक
भावी पुस्तालाई स्वच्छ वातावरण सबैको दायित्वः प्रधानमन्त्री ओली
भ्रमण वर्ष २०२० ले विश्वमा नेपाललाई चिनाउने छ
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले श्रमिकको जीवन सुरक्षित गरेको छ
मैले अजयजीलाई फसाएको छैन जो सीइओ भएपनि यो घटनाको छानवीन जरुरी थियो
बैंकर्स संघ सीइओहरुको सट्टा बैंक सञ्चालकहरुको संगठन हुनपर्ने हो
नबिल बैंकलाई बिग मर्ज आवश्यक छैन
पार्टी एकता लेनिन दिवसमा टुंगिन्छ
पुसमा प्रथम एसिया कप खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले २२.५०% नगद लाभांस दिने
चलचित्र मखमली मखमलीको “फुल भैं फुलेको मेरो जिन्दगी” गित सार्बजनिक
फेसबुक विश्वका शीर्ष १० ब्राण्डबाट बाहिरियो
अब बैंकिङ क्षेत्रमा पनि एआई सेवा सुरु
बैंकमा खाता खोल्ने महिलाको संख्या ७३ लाख ३४ हजार
एनआईसीबाट वल्र्डलिङ्कको बिल तिर्दा ३ सयसम्म क्यासब्याक
प्राइम लाइफको चुक्तापुँजी दुई अर्ब नाघ्यो
एनआईसीको दक्षिणा प्लस योजना
दशैँ गीत लिङ्गे पिङ सार्वजनिक
प्रमोदको भिडियोमा अन्जली
मेलम्ची खानेपानी प्रशोधन केन्द्रको काम अन्तिम चरणमा